Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanandramana vaovao tsy manam-paharoa
Ny fomba fihaonan'ny olona dia mitohy mivoatra.
Ankoatra ny teknolojia, ny singa ao anatin'ny traikefa fivoriambe vaovao dia mifototra amin'ny siansa fitondran-tena sy ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny tontolo iainana.
Raha mbola mivoatra hatrany ny fomba fihaonan'ny olona, ​​dia vonona ny hanome ny traikefa fihaonana amin'ny ambaratonga vaovao ao amin'ny Ideation Studio vaovao 7,000 metatra toradroa, ny mpikambana farany ao amin'ny fikambanan'ny fihaonambe IACC. Miara-miasa amin'ny Cisco Systems, Park MGM no trano fandraisam-bahiny voalohany maneran-tany manolotra tarika Cisco Webex ™ Boards sy Cisco Webex Teams, manome ekipa efitrano fivoriana tena izy sy virtoaly ifarimbonana, fiantsoana horonan-tsary, whiteboard ary fizarana naoty, rakitra ary fampisehoana.
Ny mpikarakara fihaonana, mpanolotra ary ny mpanatrika dia mankasitraka ny fahafahan'ny Space Ideation Studio fihaonambe “marani-tsaina” hahafantatra ny fitaovan'ny olona tsirairay rehefa miditra amin'ny efitranony voatondro izy ireo, na inona na inona karazana fitaovana, maodely na maodely. Tsy misy tariby ary tsy misy passcode takiana amin'ity efitrano fivoriana azo antoka ity. Ny rafitra intuitive koa dia manana ny fahaizana maka ireo taratasim-pivoriana sarobidy nataon'ny ekipa ary manao azy ireo sy ireo fitaovan'ny fivoriana ho mora azo foana, ela be taorian'ny nifaranan'ny fivoriana, nanatsara tanteraka ny zavatra niainana tamin'ny fivoriana. Raha misy olona mila miditra lavitra, ny traikefa dia tsotra sy mahery ihany.
Ny haavon'ny seza sy ny latabatra, ny jiro, ny gorodona ary ny fanaingoana ny efitrano no nofidina hanatsarana ny fifamatorana sy ny fikorianan'ny hevitra. Miaraka amina lamina efatra sy efitrano 10 ho an'ny vondrona misy enina ka hatramin'ny 24, ny safidy isan-karazany dia manome vahaolana mety amin'izany fivoriana drafitra stratejika manaraka izany.
Ny rafitra mandroso ara-teknolojia, miaraka amin'ireo fikirakirana sy siansa mifototra amin'ny siansa, no antony lehibe nahatonga ny Ideation Studio ho mpikambana vaovao indrindra ao amin'ny IACC, vondrona elite misy toerana 300 an'ny kaonferansa any amin'ny firenena 26 izay miezaka ny hisolo tena ny 1% ambony amin'ny toeram-pivoriana. maneran-tany. Ny toerana anaovan'ny mpikambana IACC dia ampahany amin'ny vondrom-piarahamonina manerantany manolotra fihaonana vaovao sy miavaka.
Mark Cooper, CEO an'ny IACC, dia nilaza fa, "Ny volavolan-kevitry ny Park MGM's Ideation Studio dia nandinika ny fironana sy ny safidin'ny mpivory fihaonana izay fantatry ny IACC tamin'ny alàlan'ny fikarohana nataony. Ny ekipa mpitarika ny Park MGM dia nandatsaka fanoloran-tena sy fientanam-po tokoa amin'ny fampivoarana toeram-pialofana ho an'ny fivoriana kely ary manantena ny hitondra ny hetsika ataonay any amin'ireto toeram-pivoriana mitaona fanahy ireto izy amin'ny ho avy. ”
Ny fanokafana ny Ideation Studio dia manamarika ny fahavitan'ny The Center Center ao amin'ny Park MGM, manome fomba fijery vaovao izay manome aingam-panahy ny fifandraisana sy ny fifandraisana. Mora azo avy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny rehetra sy ny lobby fialan-tsasatra, ny efitrano fihaonambe mirefy 77,000 29 metatra toradroa dia misy efitrano fandraisam-bahiny mivelatra, efitrano fivoriana 4,345, trano malalaka ivelan'ny trano iray mirefy 5,200 metatra toradroa, ary ny Ivotoerana Fivoriana Madison - voamarina ihany koa IACC ary Las Vegas 'ivon-toeram-pivoriana voalohany misy ny Daily Meeting Package (DMP). Ho fanampin'ny efitrano fivoriana, Park Theatre, ivon'ny traikefa nahafinaritra an'i Park MGM, dia natokana ho sehatra hetsika sonia afaka mandray vahiny 30,000 ao anatin'ny XNUMX metatra toradroa.
Miaraka amin'ny habakabaka maoderina sy tsy nentin-drazana ary ny endrika mavitrika, ny tolotra fivoriana vaovao an'ny Park MGM dia mameno ny filàna tsy ilaina ao Las Vegas.
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Vancouver dia miarahaba ny mpandeha fiaramanidina 25 tapitrisa